Maalinta: Meey 9, 2017
Magacaabista Guddi Ammaano loogu talagalay Aras Kargo: Saamileyaasha A A ee haysta saamiga% 48,13 ee Aras Kargo Anonim Şirketi, Guddoomiyaha Golaha Aras Holding Barış Baran Aras iyo Meral Aras, İstanbul Anadolu 4. [More ...]
tareenka ugu horeysay Turkey ee alxanle Sertifikalanıy bilaabay koorsooyin Mashruuca: Taageera Waxbarashada Inta la Noolyahay ee Turkey-II Barnaamijka Grant Midowga Yurub "Ray alxanle waa Sertifikalanıy" taageeray bilaabay koorsooyin mashruuca tababar xirfadeed u yeedhay. TCDD [More ...]
Nexansanku waxay bilaabeysaa Seminarada Performance on CPR iyo Cabirka LAN
Nexans CPE iyo cable LAN ee Performance Seminaarada inay bilow: Nexans Turkey, dalka ayaa dhaqan galay, waayo, fiilooyinka on 10 June 2016 "CPR (Regulation Dhismaha Qalabka)," iyo "LAN Cable Performance" si uu u tilmaamo arrimaha [More ...]
Akjaray lama baadhi doono
Akçaray lama baari doonin: Mashruuca taraamka ee Kocaeli Metropolitan Municipal waa uu dhamaanayaa. Dhameystirka mashruuca kadib, xuquuqda howlgalka iyo howlgalka waxaa loo wareejin doonaa Gaadiidka 'A.' oo ka fog kormeerayaasha baarlamaanka Duqa Magaalada Kocaeli Metropolitan Dowlada Hoose İbrahim Karaosmanoğlu [More ...]
Qiimaha Express Tareen Ticket 2017: Turkey State Tareennada (TCDD) ee khadadka hawlgala ee TCDD General Directorate of Gaadiidka Inc Raadinta jawaabaha su'aasha ah sida ay u sarreeyaan qiimaha tikidhada Xawaaraha Sare ee ay maamusho [More ...]
Idiris AS wuxuu ku dhawaaqay in adeegga gawaarida la joojiyay tan iyo markii 12.30 ay sababtay qulqulo daran.
Diyarbakır ee Sur xaafadda 10 degmada waxaa la siin doonaa adeegga gaadiidka dadweynaha
Adeegga gaadiidka dadweynaha waxaa la siin doonaa xaafada 10 ee degmada Sur ee Diyarbakır: Degmada Diyarbakır waxay bixin doontaa adeeg gaadiid dadweyne laga bilaabo Maajo illaa 10 iyadoo la go'aaminayo wado cusub oo dabooleysa tuulada 15 ee miyiga degmada Sur. dheeraad ah [More ...]
Abaalmarinta Gaadiidka Gaadiidka ee Magaaladda Gaziantep: Gaziantep Magaalo-weynaha Magaalo Weyn ee “Magaaladda Intersection Efficiency Kordhinta” mashruuca ugu weyn ee gaadiidka ayaa la siiyay abaalmarinta mashruuca wax soo saarka N 2017 Awards ödül. Dowlada Hoose ee Gaziantep [More ...]
Wadooyinka Akcaray waa la daboolay
Wadooyinka dhex mara Akçaray waa kuwo dammaanad qaadaya: Mashruuca Akçaray Tram, kaasoo raaxo ugu keenaya gaadiidka magaalada Kocaeli Magaalo-Weyne, howlaha daruuriga ah ee wadooyinka aan la dayacin inta ay socdaan kaabayaasha iyo shaqooyinka dhismayaasha suufiyada. Wadooyinka-daboolan iyo dariiqyada [More ...]
İsa Apaydın Waxa uu ka qayb galay shirkii UIC-RAME ee Tehran: Maamulaha Guud ee TCDD İsa ApaydınUIC-RAME (Ururka Caalamiga ah ee Tareennada-Golaha Bariga Dhexe ee Bariga), halka 19 uu yahay ku-xigeenka madaxweynaha. kulan, oo ay martigelisay Iran Railways 02 bishii Maajo 2017 [More ...]
Tababar shaqsiyeed iyo mid horumarineed ayaa lasiiyay shaqaalaha MOTAŞ: Gaadiidka Dawlada Hoose ee Malatya iyo Adeegyada Gaadiidka Dadweynaha MOTAŞ A.Ş. shaqaalaha waxaa lasiiyay tababar shaqsiyeed iyo mid koriimo. Waxaa qoray Malatya Metropolitan Dowlada Hoose, si loo wanaajiyo wax soo saarka shaqaalaha [More ...]
Sarkaalka-Sen gaajo-saboolnimada ku dhawaaqday tirooyinka April: Sarkaalka-Sen bil walba si joogto ah u qabtay "by ay gaajo-saboolnimada" cilmi, 4 qoys ee marinka gaajo Turkey ee 1.725,18 TL iyo saboolnimada 4.715,65 TL [More ...]
Gaadiidka ka socda Baska Magaalada Antalya ilaa 200 Tirada basaska
Basaska 200 ee ka socda Dawladda Hoose ee Magaalada Antalya: Antalya Metropolitan Municipal waxay heli doontaa basaska 200 si ay u xalliyaan dhibaatooyinka gaadiidka magaalada. Qodobka loo qaatay ajandaha Golaha Magaalada iyo 50 [More ...]
Tarjumaadda Akcaray waa inay noqoto mid tartiib tartiib ah
Jid ama mid kale .. Waxaan is idhi Ramadaan, waxaad tidhaahdaa Bayram. Aan kuu sheego Sebtember, waxaad ugu yeeraysaa dhamaadka sanadka. Waxay si adag madax adag uga dhigaan izm Izmit. Ugu dambeyntiina taraamka ayaa ku dhex socon doona magaaladan. Kadib markaad shaqo bilowdo [More ...]